ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် ဖိတ်ကြားစာ (စင်္ကာပူ)”
U Shan Sar said...
Are you joking? Why May 31st?
Is there any special calendar in Singapore?
Hmar deakhar le hmar pay ma pot.
I didn't see 31st in my calendar
ဧပရယ်၊ ဂျွန် နဲ့ နိုဝင်ဘာ။
လတစ်လမှာ ဘယ်နှစ်ရက်ရှိတာကို ပြက္ခဒိန်ကြည့်စရာမလိုဘဲ သိလာတဲ့အထိအောင် နေ့တိုင်းရွတ်ပေး။ လမ်းသွားလည်းရွတ်သွား။ လမ်းမှာရွတ်ရင်းနဲ့ မေ့သွားရင် တွေ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ယောက်ကိုမေး။ အဲ...တစ်ခုကျန်သေးတယ်။ နောင်ကိုလည်း မေ ၃၁ မရှိတဲ့ ပြက္ခဒိန်စဉ်မမီတဲ့ ပြက္ခဒိန်မျိုး ညာရောင်းမခံရအောင် သတိထား။ မဟုတ်ရင် ရှံစားကတော့ အချဉ်ပဲ၊ လဒူပဲလို့ ပြောခံနေရမယ်။
i won't go..... i don't believe.
To "Anonymous" above
You don't believe in what? The movement that is organized to demand the release of Daw Aung San Su Kyi? Organizers? The blogger?
I think this is the right thing to do as asking for the release of an old woman is not against the law.
If you were saying you do not believe in moment. Think twice.
Old sick man Than Shwe and his boys on his lap are the ones you should not believe.
I will surely come. See you there!
brother, 31 May or 30 may? confirm us the date. we wil be there
yeah.... i don't believe in that gathering and what would be the consequences.I can guess that would be nothing more than mess. Who care ...
in such case... need not to say about that OLD --UCKING MAN.......
that is justacomparison ....too childish to argue with you.
Those who are interested to join, you are all welcome after the date confirm by our brother Paw ofcoz :P
Those who are not interested to join, its your choice, nobody force you. you may ignore.
မေ ၃၁ ရှိမှန်းမသိတဲ့ သောက်လဒူရှုပ်လို့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြောပါ့မယ်။ မေ ၃၀ မဟုတ်ပါ။ မေ ၃၁ မှာစုဝေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင် ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းကို ရွေးသင့်တယ်လို့ အမြဲပြောလာသူတွေ ပါဝင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မထိရောက်ဘူး ထင်ရင်တော့ ဒိထက် ထိရောက်မယ့်နည်းကို အကြံပြုကြပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အလေးထားရမယ့်ကိစ္စမို့ မပါဝင်နိုင်ဘဲ ငါ့စကားနွားရ လာပြောတာမျိုးတော့ သည်းခံပါ။
Grab anything YELLOW and join us (Please).